Analytics ကမ္ဘာကြီးသည် Webtrends တွင် ၀ မ်းနည်းနေသည် Martech Zone
Analytics ကမ္ဘာကြီးသည် Webtrends တွင်ရှုပ်ထွေးနေသည်
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 30, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒါပဲ? ငါတို့ရသမျှပဲ ငါဘလော့ဂ်များကိုစစ်ဆေးပြီးခေါ်လိုက်တယ် Webtrends VP, Jascha, Webtrends site ပေါ်တွင်နိမိတျဆိုးမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်ရက်စွဲအပေါ်ကျုံးရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။ ငါထဲကအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုညှစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် Webtrends လူမှုမီဒီယာဂုရု, Justin.
ငါ #webtrends သတင်းအတွက်တွစ်တာကိုစစ်ဆေးသည်။
စီအီးအိုအဲလက်စ်ယိုဒါး Aprilပြီလမှာထရပ်တယ် 2009 Engage ညီလာခံ သူ၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်မြင့်မားသောပန်းတိုင်အချို့ချမှတ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးသတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် လူမှုမီဒီယာလက်ခံနှင့်ပေါင်းစပ်နှင့် API မှတဆင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အချက်အလက်များသို့အခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
Webtrends သည်ကျွန်ုပ်အားစျေးကွက်ရှိအခြားမည်သည့်ကစားသမားထက်မဆို ပို၍ စိတ်ဝင်စားစေသည်။ Webtrends ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစတင်အသုံးချပြီးနောက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာသြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာမျှော်လင့်နေပါတယ်။
Tags: ios စမ်းသပ်ခြင်းဖိုင်ကြီးကြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ်များ.ရာဝတီလူမှုရေး bookmarkingဝဘ် 2
30:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 02
မင်းငါ့ကိုပိုက်ဆံမပေးဘူး၊ သူတို့ပြောတာကိုမင်းပိုက်ဆံပြောတယ်။ know
30:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 40
Webtrends ကဲ့သို့သောအသံများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာဆန်းကြယ်မှုအနည်းငယ်ကိုဖန်တီးရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒါကအမြဲတမ်းဆိုရှယ်မီဒီယာနယ်ပယ်တွင်ထိရောက်သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။
30:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 14
ဟေ့ Doug သြဂုတ်လ ၄ ရက်တောင်မှတောင်မှတော့မကြားရသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာဒီနေ့ခေတ်မှာအရမ်းကောင်းတဲ့သတင်းတွေရှိသေးတယ်။ Multivariate Testing, Optimization and Targeting Leader Widemile ကို ၀ ယ်လိုက်တာနဲ့တရားဝင်ပဲ။
30:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 23
ဂျက်စ်ပြောင်း၊ ရှေးရှေးတုန်းကလူတွေဟာပလတ်စတစ်များကဲ့သို့ရွေ့လျားနေသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်အရှိန်အဟုန်ကိုစတင်တက်ကြွလာကြသည်။ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်!